ISEMTHETHWENI UNCEDO KUBA DISABLED
Free isemthethweni ingcebiso kuba disabled abantu usebenzisa i-Internet kwi-uninzi kukuba ngenye ezinolwazi kunokuba ngenene ngokuphonononga kwi-egqiba nayiphi na imbambano. Ngamnye kunjalo, ngamnye imeko ifuna a enkulu inani nuances ezingekho nje mbasa ngaphandle personal incoko phakathi u kwaye umxhasi.
Free isemthethweni ingcebiso kungasinceda a disabled umntu kuphela kwimeko xa ufuna ukucacisa ezinye izibonelelo zalo mthetho wepalamente wanika ethile imeko, umthetho, njalo-njalo. Ukuba ufumana kwilixa xa hayi kufuneka kubekho umsebenzi lawyer okanye abachopheli-isisombululo le meko.
Jonga isebe»- Association of kubathengi»lilungile ukunikezela yenziwe ukuba ingasebenzi kwaye iintsapho zabo isemthethweni iinkonzo kwi-preferential mimiselo, kwaye kwezinye iimeko free.
Subsidized isemthethweni aid elinolwazi isemthethweni noncedo umntu kwezinye izihlandlo ngokupheleleyo okanye iifayile yi-state.
Kuba iimpawu i-inkqubo subsidized isemthethweni aid ngala alandelayo ezibini:
Abamkeli ka-subsidized isemthethweni aid:
buthathaka loluntu iqela abasweleyo ka-protection yi-imo (nge-mental nokukhubazeka, amahlwempu, yenziwe ukuba ingasebenzi, abantwana ngaphandle parental care, njl.
abantu abaya kufumana kwabo ngendlela isemthethweni imeko enxulumene sesihloko ka-kwalomgaqo-siseko amalungelo nenkululeko (suspects kwaye umtyholwa yolwaphulo-mthetho, abantu ngokulawulwa deportation, njl
abantu akunakho kumelana apho kwi-imbambano ngokucacileyo na ngaphakathi capability ye-umchasi — (a private umntu ngokuchasene Corporation).
Subjects abo babekho yabelwe uxanduva kuba kukubonelela subsidized isemthethweni uncedo (bamatyala) ingaba umahlule kwi:
private abantu kunye organizations ababelungiselela isemthethweni iinkonzo yentengiso, characterised yi-iindlela ka mna-ulawulo private lokuthengwa kweenkonzo zophuhliso;
uthungelwano lwe ezikhethekileyo urhulumente isemthethweni Bureau wadala kwaye financed ngokuthi urhulumente, nokunika uncedo bonke abo qualifies lokuzamkela ngomhla iindleko ezinokufumaneka yombuso;
uluntu organizations nezinye nonprofits ikholisa ngomhla iindleko ezinokufumaneka ka-philanthropists kwaye abantu bamncedise. Ukongeza subsidised isemthethweni aid rhoqo ukwenza imisebenzi apho ubonelelo isemthethweni iinkonzo sesinye iinxenye (noncedo ababehlelelekile ngaphambili, loluntu amaqela, njl.
Ulungiselelo isemthethweni aid:
ukulungiselelwa na amaxwebhu asemthethweni;
ukumelwa ka umdla kwi-ubudlelwane-wonke amagunya kwaye iinkundla;
Kangakanani le subsidy:
UKUBONISANA A LAWYER